[Ukara] Wondershare Video Editor for Mac: Mac Video Editor
Filmora maka Mac
Gbalịa Ọ Free Mac OS X 10.7 - 10.10 Buy Ugbu a
Olee ihe nwere ike a video toolbox MEE? Ose elu Your Home Video na a Ire nke Hollywood
Ndị kasị ọrụ-enyi na enyi n'ụlọ video edezi software, featuring smart ma kensinammuo edezi ngwaọrụ na ka ị na ike Hollywood-themed fim n'ime nkeji.
Foto dị na-na-na foto
Nchekwa onwe Eme
Foto dị na-na-Foto
Nwere otutu vidiyo ma ọ bụ ihe oyiyi egosipụta na otu etiti! -Eme ka ị video akụkọ na ọbụna ihe na-adọrọ adọrọ visual ahụmahụ.
Green ihuenyo (Chroma Key)
Mee ka gị na nnọọ onwe DIY Chroma Key Green ihuenyo ma na-ọkachamara video mmetụta dị ka ndị ị hụrụ na ihe nkiri!
Playback Speed ​​Control
Ị bụ Action Director! Na-achịkwa nke playback ọsọ na gị na obere vidiyo.
Wepụ mbụ audio track si video footage, ma dezie ụda iche iche si video mmewere na otu usoro iheomume ọnụ ọgụgụ.
Ịgbanwe isiokwu (s) gị footage ike surreal & na-adọrọ mmasị miniatures.
N'otu ntabi mma gị foto àgwà na-enyere ndị mmadụ aka, ebe na nkọwa ndị ọzọ anya ha kacha mma.
Akpaghị aka ịchọpụta idaha mgbanwe footage na ike a ọhụrụ clip maka onye ọ bụla dị iche iche idaha.
Pụrụ iche utịp Ọbá Ịmụbawanye Your Imagination na ihe karịrị otu narị Pụrụ iche visual mmetụta
Tụgharịa n'ụlọ gị gị na video n'ime ihe pụrụ iche na di ntakiri mgbalị.
Pụtara iyo mmetụta
Họrọ si n'elu 80 kpochapụwo, okike na professionally e nzacha, ikpuru na-dobe itinye ha na gị na obere vidiyo.
Dynamic ikwu n'ụzọ
E nwere 59 pụtara mgbanwe mmetụta maka ị ịhọrọ site na.
Fanye foto na nkà ka a mata a isiokwu ma ọ bụ tinye ezumike flair, dị ka a Christmas osisi ma ọ bụ a obi.
Buru si 19 dị iche iche-ekere òkè customizable ederede mmetụta.
Intros na Ebe E Si Nweta
Hazie gị nkiri na 13 trendy na pro-na-achọ intros nakwa dị ka ọgwụgwụ Ebe e si nweta ndebiri.
Welienụ creativity na-esonụ larịị na a nnukwu nhọrọ nke nsonaazụ ụda.
Ike TOOLSET Advanced edezi na enweghị Atụ ohere
Mepụta ikpọ ọkachamara-na-achọ n'ụlọ vidiyo na multi-track usoro iheomume, machie footage, PIP akpọkwa, green ihuenyo mmetụta, na ọtụtụ ọtụtụ elu edezi atụmatụ, na-akpata anyị maara, gị creativity nwere dịghị ịgba!
Ngosi gị na creativity ụwa Share Ọrụ Gị
Ngosi gị creativity gị na ezinụlọ gị, ndị enyi na ndị fọdụrụ nke ụwa! Ị nwere ike mfe ebipụta gị masterpiece na ọtụtụ ụzọ.
N'otu ntabi bulite gị na obere vidiyo na-Facebook, Vimeo na YouTube.
Tọghata ma ọ bụ ọkụ gị vidiyo na DVD na-enye ha dị ka ndị kasị kwesịrị ncheta onyinye.
Ebuli obere vidiyo maka ndị zuru okè ndakọrịta na gị iOS na Android ngwaọrụ.
Weghara ọkacha mmasị gị oge na ngwa ngwa snapshots dị ka ị na Michael ndị footage.
Ọkacha mmasị Nchịkọta
Zọpụta ederede ndebiri, nzacha, ikwu n'ụzọ na pụrụ iche utịp gị ọkacha mmasị maka mfe ohere n'oge ga-eme n'ọdịnihu oru ngo.
Record voiceovers ma tinye fun narrations aka itinye aka gị kiriri ya.
Ịhụchalụ na ihuenyo zuru oke
Abụọ-ego ọrụ gị na ezigbo oge na ihuenyo zuru.
Usoro iheomume / storyboard
Ịgbanwee n'etiti usoro iheomume na storyboard ụdịdị n'oge ọ bụla na-eme isi ma elu ndị ọzọ edezi.
A ọrụ-enyi na enyi ngwá ọrụ ka ịhụchalụ na mbubata mgbasa ozi faịlụ.
Main interface nke Video Editor for Mac
Tinye mmetụta na-video
Advanced video edezi
Dị iche iche mmepụta nhọrọ
Nyocha ahịa anyị Na Filmora maka Mac - na ị ga-, Oke
Nov 26,2015 14:47 pm
Ya ok & nnọọ mfe na-aga na ya
Nov 25,2015 18:53 pm
Mfe iji ma dị ike!
Otu ihe a ezi software - mgbe ị na-amalite ị ga-ịrụcha ọrụ ahụ. Filmora bụ nnọọ ụdị software.